Shan Ciyaaryahan Oo Premier League Ka Ciyaara Oo Raadinaya Dhaqaaqitaanka Bisha Janaayo Ee Suuqa
HomeHoryaalka IngiriiskaShan ciyaaryahan oo Premier League ka ciyaara oo raadinaya dhaqaaqitaanka bisha Janaayo ee Suuqa
December 23, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Mesut Ozil iyo Dele Alli ayaa ka mid ah ciyaartoy dhowr ah oo laga yaabo inay dhaqaaqaan bisha janaayo.
wakaaladda wararka ee PA ayaa fiirineysa shan ciyaaryahan oo laga yaabo inay ka dhaqaaqaan kooxohooda bisha Janaayo.
Ozil waa ciyaaryahanka ugu mushaharka badan taariikhda Arsenal, laakiin waxaa laga reebay kooxda tababare Mikel Arteta ee ​​Premier League iyo Europa League xilli ciyaareedkan. Ozil wuxuu udub dhexaad u ahaa kooxda markii ugu horreysay ee uu kooxda qabto Arteta, laakiin daqiiqad uma uusan ciyaarin Gunners tan iyo bishii Maarso 7. In kasta oo qandaraaska uu kula joogo Emirates uu soconayo illaa dhammaadka ololaha, waxay u badantahay in kooxda ka tago.
24 jirkaan ayaan ku soo bilaaban kulan Premier League ah kooxda Tottenham tan iyo furitaanka xilli ciyaareedkaan, laakiin wuxuu ka soo kacay kursiga keydka kulamadii ugu dambeeyay ee horyaalka ee Crystal Palace iyo Liverpool waxaana laga yaabaa inuu ku lug yeesho wareega 8da Carabao Cup ee ay la ciyaarayaan Stoke. . Xiddiga reer England ayaa lagu soo koobay kaliya 10 kulan oo uu u saftay kooxda Jose Mourinho xilli ciyaareedkan, marka la barbardhigo 38 kulan xilli ciyaareedkii hore, waxay u badantahay in uu baxayo.
28 jirkaan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xagaagan, waxaana lala xiriirinayay inuu amaah ugu dhaqaaqi doono bisha Janaayo kooxda Sheffield United. Lingard ayaa ciyaaray kaliya labo kulan xilli ciyaareedkan, labad kulan ayaa ah Carabao Cup bishii October. Si kastaba ha ahaatee, ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa horay looga soo tagay dhamaadka xilli ciyaareedkii hore halkaasoo uu ka soo muuqday kaliya labo kulan oo Premier League ah.
Inkastoo wakiilka Pogba Mino Raiola uu sheegay in ciyaaryahanka khadka dhexe aysan u badneyn inuu ka tagayo Old Trafford bisha Janaayo, hadana wuxuu sidoo kale sheegay in ciyaaryahanka reer France uusan ku faraxsaneyn kooxda islamarkaana uu u furan yahay isbedel. Pogba ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Instagram wuxuu ku sheegay inuusan dooneynin inuu dhaqso u aado meel kale, inkasta oo qaab ciyaareedkiisa dhanka Macalin Ole Gunnar Solskjaer uusan noqon mid cajiib ah isla markaana wuxuu saftay 22 kulan xilli ciyaareedkii hore.
Jose Mourinho ayaa sheegay in Winks uusan bixi doonin bisha Janaayo laakiin ciyaaryahanka khadka dhexe ee England ayaa ka baxay dooqa koowaad ee tababaraha waxaana inta badan lagu soo koobay inuu ciyaaro Europa League xilli ciyaareedkan. Winks ayaa sheegay inuu si aad ah u doonayo waqtiga ciyaarta si uu isugu dayo inuu ku biiro kooxda England xagaaga soo aadan, laakiin haatan taasi waxay umuuqataa mid aan macquul aheyn waxayna u badantahay in uu baxayo